Inona no atao hoe Unboxed Network?
Unboxed – goavana Market
Brands no mandany ny 36 lavitrisa dolara US tao amin'ny haino aman-jery sosialy dokam-barotra isan-taona. Ireo dokam-barotra dia matetika no fotoana tsy niraharaha, fa tsy natoky ny olona. Mandritra izany fotoana izany, 9 avy any 10 afa-po ny olona matoky olona iray nalefan'i fantany. Izany, no toerana Unboxed avy amin'ny. Isika mifanaraka-manao marika amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny mpampiasa izay miteraka lahatsoratra tena afa-po marika mifandray. Manampy be dia be andraikitra tsara kokoa, miteraka tena marika fisoloana vava sy ny teny-of-vava vokany. Izany ihany koa ny haino aman-jery sosialy Manome hery mpampiasa.
A miasa Business
Unboxed dia miasa tanteraka ny teknolojia ampiasaina amin'ny alalan'ny 100+ marika eran- (naharitra ny Etazonia, Kanada, ny Fanjakana, Alemaina, Danemark, Norvezy ary ireo tany baltika). Over 40,000 andalana ny kaody, -jatony iterations, sy ny vokatra pivots nandritra ny taona dia nanampy orinasa ny amin'izao andro izao hamonjy goavana teny-of-vava campaignsthat tafiditra an-tapitrisany isan'andro mpampiasa haino aman-jery sosialy.
The Perfect fanafodin'ny Companies
Unboxed manolotra ny tonga lafatra ho an'ny orinasa fitsaboana marary ny mandany fotoana sy vola amin'ny orinasa influencer-barotra izay miankina amin'ny asa mafy noho ny mahita ny dingana tsara influencers, fifanakalozan-kevitra efaha amin'ny isam-, ary ny fitantanana ny fifandraisana. Ireo dingana mikasika avo mametra ny isan'ny mpampiasa haino aman-jery sosialy izay afaka mandray anjara amin'ny teny-of-vava sy ny raharaham-barotra fanentanana matetika miafara niara-niasa tamin'ny vitsivitsy mpampiasa haino aman-jery sosialy – influencers na ny olo-malaza.
Unboxed dia tena ilaina ny rehetra
Nieritreritra izahay ivelan'ny efajoro dia niakatra miaraka amin'ny vahaolana izay mamela antsika mba hanoloana izany dobo kely ny influencers amin'ny an-tapitrisany isan'andro mpampiasa haino aman-jery sosialy – izay antsointsika hoe Unboxers. Fampielezan-kevitra ihany koa izahay manolo-barotra mpitantana amin'ny manam-pahaizana izay afaka mitantana an'arivony fampielezan-kevitra amin'ny fomba décentralisées, amin'ny alalan'ny fanakambanana AI miaraka amin'ny tsy miankina manam-pahaizana tambajotra barotra. Miaraka amin'izany, dia hanampy mpampiasa haino aman-jery sosialy mba hahazo ny anjarany avy ny $ 36bn tsena.
Ny Drafitry ny Unboxed
Ny raharaham-barotra no nametraka mitombo tsy miasa amin'ny 10 firenena amin'ny fanomezana ho an'i miasa any amin'ny tany maherin'ny 100 tsena. Mba hanafainganana ny dingana dia hanangananay ny ekipa ny 125 matihanina amin'ny 2021. Hamaky bebe kokoa…
altcoinsandian-tsoratra rojovola madinikaico